Schematics & PCB Design Principles | Easydevboards
Home / Products / Schematics & PCB Design Principles
Schematic Diagram တခုကို လူတိုင်း လွယ်ကူစွာ ဖတ်နိုင်ဖို့ နားလည်လွယ်အောင် ဘယ်လို ဆွဲမှာလဲ? မိမိ Design ကို စက်မှုလက်မှု သိပ္ပံကျောင်းထွက်တယောက်က ဖတ်ပြီး Circuit ကို ပြုပြင်တတ်ပြီးလား? မိမိ Design က မိမိကလွဲလို့ ဘယ်သူမှ နားမလည်ဖြစ်နေသလား? မိမိ Design က တကယ့် အများထုတ်လုပ်ရပြီးဆိုရင် ထုတ်လုပ်မှုမှာ ပါဝင်မယ့် Operators, QAs, Engineer တွေက ဖတ်ပြီး သူတို့က မိမိ Design ကို တကယ့် Product ဖြစ်အောင် ထုတ်ပေးမှာလား?
မိမိ Product က လူတွေကို ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ Signal တွေထွက်နေသလား? နိုင်ငံတကာ စျေးကွက်တင်ရောင်းရင်ကော နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းတွေနဲ့ ညီရဲ့လား? စသဖြင့် အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးမယ့် Schematics & PCB Design Principles (Art of Electronics) အကြောင်းကို Electronics ရဲ့ အနုပညာ မြောက် တွေးခေါ် စဥ်းစားမှုများနဲ့ အတူ ခံစားတင်ပြပေးပါတော့မယ်…
သင်တန်းဖွင့်မည့် ရက်။ 25/April/2017
Duration:2months (One lesson per week)
Pre-requirement: Basic Electronics Design Course
Fees: 20000 Kyats
Schematics & PCB Design Principles ကို အခမဲ့ တက်ရောက်ခွင့်ရသူများ မိမိထံမှ Coupon တောင်းယူပြီး Register လုပ်ပေးပါရန်။ Coupon များကို မနက်ဖန်မှ စပြီး ပေးပါမည်။
ယခု Basic Electronics Design Course တရောက်နေသူများ 20-April-2017 အမှီ Project တင်နိုင်သူများထဲမှ ထူးချွန်သူကို အခမဲ့ တက်ရောက်ခွင့်ပြုမည်။ အခမဲ့ တက်ရောက်ခွင့် ပြုသူကို မိမိ မှ ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ပြီး မိမိ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းသာဖြစ်သည်။ အငြင်းပွားခွင့် မရှိ…
Basic Electronics Design Course မတက်ရောက်ထားသူများက Course2ခုပေါင်း ၃ သောင်းကျပ်ပေးသွင်း တက်ရောက်နိုင်ပါသည်…